Fiangonana Apokalypsy Ambohimarina - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ny sabata faha 29 ny volana Oktobra 2011 lasa teo no notanterahana tany Antsohihy ny famaranana ny fampianarana izay natao tany an-toerana. 153 no vita batisa tamin’io fotoana io, rehefa resy lahatra tamin’ny fampianarana sy ny kaoferansa izay niarahana tamin’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol.
Ankoatra izay, dia misy hatrany ny fiaraha-mivavaka etsy amin’ny fiangonana foibe Ambohimarina Itaosy. Ny mpihiran’i Jehovah no nitondra ny fisoronana ny sabata lasa teo, ary ny loholona RALIMANANA Justin kosa no nitondra ny toriteny. Mbola ny fitiavana hatrany no nisongadina tamin’izany. “Ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana dia tsy azo trandrahana amin’ny boky, na alain-tahaka amin’ny hafa… Efa tokony ho voavoatra isika satria Andriamanitra dia efa manavaka antsika”. Hoy ny mpanompon’Andriamanitra. Ny tapany hariva kosa dia nitohy ny sekoly sabata mikasika ny fifandraisan’ny ray sy ny zanaka.
Isan’ny nanamarika iny faran’ny herinandro lasa teo iny ihany koa ny famaranana ny lalao “Iza mahay” izay nokarakarain’ny rantsana oliva. Tetsy amin’ny foiben’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Ny fizarana ny loka amin’izany dia hotanterahina ny 20 novambra 2011 mandritra ny hetsika Andron’ny Tanora Apokalypsy andiany voalohany
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao SamihafaÉtiqueté avec fivoriam-bavaka, fivoriam-be, sekoly sabata